Maxay Somaliland ka tiri xilkii loo magacaabay Fowsiya Yuusuf Xaaji? - Caasimada Online
Home Warar Maxay Somaliland ka tiri xilkii loo magacaabay Fowsiya Yuusuf Xaaji?
Maxay Somaliland ka tiri xilkii loo magacaabay Fowsiya Yuusuf Xaaji?
Somaliland ayaa gaashaanka ku dhufatay Wasiirada maalintii shalay Xarunta dalka looga dhawaaqay gaar ahaan xilka loo doortay Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji oo ah hada Ra’iisul Wasaare ku xigeen ahna wasiirka arimaha dibada Dowladda Soomaaliya loo magacaabay.
Cali Xaamud oo ah Wasiir ku xigeenka Wasaarada Waxbarasha Somaliland ayaa sheegay inaysan waxba ka qusayn Magacaabida Dr Fowsiyo oo deegaan ahaan ka soo jeeda Dhulka Maamulka Somaliland.
Waxaa uu sheegay Wasiirka inaysan waxba ka qusayn Somaliland talaabada Dowlada ay u qaaday magaacibada qof ka soo jeeda Somalilad Wasiirka Arimaha dibada.
Xaamud ayaa muujiyay inaysan marnaba badali doonin hadafkooda oo ah inaysa ku biirayn Soomaali wayn oo ay doonayaan inay noqdaan dal madax banaan ,olalaha Gooni isu taagoodana ay sii wadayaan.
Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji sababta xilkaan loogu dhiibay ayaa waxaa ay dad badan sheegeen maadama ay tahay qof shacbiyad kuleh Somaliland inay fududayso isku imaanshaha Somaliland iyo Dowlada Soomaaliya.